မဘသနဲ့ ၀ီရသူတို့က မြန်မာနောင်းသတင်းထောက် ကိုဆွေဝင်းကို တရားစွဲဟု ဆို – MoeMaKa Burmese News & Media
လက်ခံရရှိသောသတင်းများအရ မြန်မာနောင်းသတင်းထောက် ကိုဆွေဝင်းကို မဘသအဖွဲ့ဝင်တဦးက ၆၆(ဃ)နဲ့ တရားစွဲဆိုကြောင်း၊ ၎င်းစွဲဆိုမှုကို မန္တလေးရဲစခန်းတခုက လက်ခံပြီး အမှုဖွင့်ပေးလိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။ သတင်းထွက်ပေါ်လာချိန်မှာ မတ်လ ၇ရက် နေ့စွဲ ဖြစ်သည်။ ၆၆(ဃ) အမှုဆိုသည်မှာ အွန်လိုင်းပေါ်က မဟုတ်တန်းတရား အသရေဖျက် ခြိမ်းခြောက် နှောက်ယှက်ခြင်းများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကာယကံရှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်တို့က စွဲဆိုလေ့ရှိရာ မဘသအဖွဲ့ဝင်က “ထေရ်ကြီး ၀ါကြီး သံဃာတော်ကြီးများက လေးစားရသည့် ဆရာတော် ဦးဝီရသူကို အခြေအမြစ်မရှိ ပါရဇိကနဲ့ စွပ်စွဲခြင်းသည် ပြစ်မှုမြောက်သည်” ဟု သဘောထားပြီး တရားစွဲပါသည်ဟု တရားစွဲဆိုသူ မဘသအဖွဲ့ဝင်က ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရသည့် ရာဇ၀တ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၀ီရသူက လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူများကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်ကို အများပြည်သူထံသို့ မြန်မာနောင်းသတင်းက တင်ပြပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါပြောဆိုမှုသည် ပါရဇိကကျကြောင်း မန္တလေးက ဆရာတော်တပါးက ပြောကြားခဲ့ကြောင်းကိုလည်း သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါသတင်းကို ကိုးကားပြီး သတင်းရေးသူကိုယ်တိုင်က မိမိဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာတွင် ကူးယူဖော်ပြသည်ကို အပြစ်လုပ်၍ မဘသတို့က တရားစွဲခြင်း ဖြစ်သည်။
ကိုဆွေဝင်းက အထက်ပါ အမှုစွဲဆိုမှုကို ၎င်းဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုထားသည်။
ကျနော့်ကို မဘသအဖွဲ.၀င်တစ်ဦးက ၆၆ ဃ နဲ့တရားစွဲတာကို မန္တလေးရဲစခန်းတစ်ခုက အမှုဖွင့်ပေးလိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။ (တွဲထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ခုက တရားဝင်တိုင်ကြားချက်ပါ)
Myanmar Now ကရေးတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ အမုန်းစကားများဖြန့်ချီနေတဲ့ သင်္ကန်းဝတ်ဝီရသူက ဦးကိုနီလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့အကြောင်း ကျနော်တို့သတင်းတစ်ပုဒ်ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသတင်းမှာ မန္တလေးကအခြားဆရာတော်တစ်ပါးက ဒီလိုပြောဆိုမှုဟာ ပါရာဇိကကျကြောင်းပြောကြားချက်ကိုပါထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒါကိုပြန်ကိုးကားပြီး ၀ီရသူပါရာဇိကကျပြီလို့သိရကြောင်း ကျနော်က အဲဒီသတင်းကို ကျနော့်ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးပြီး ပြန်ရှဲခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဦးကိုနီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနောက်မှာ ပေါ်ပေါ်တင် ပြည်သူကိုပြန်လည်ခြိမ်းခြောက်လာတဲ့ မဘသခေါင်းဆောင်တွေရဲ. ပြောစကားကိုအခြေခံပြီး မဘသပြန်လာပြီဆိုပြီးရေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီမဘသပြန်လာပြီဆိုတဲ့စကားရပ်ကို အမှုဖွင့်ရာမှာထည့်သွင်းကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဘာကိုယ်မှအတည်မပြုနိုင်ပါ၊ ရဲတပ်ဖွဲ.ကလည်း ကျနော့်ကို ဆက်သွယ်လာခြင်းမရှိသေးပါ။ (တိုင်တန်းသူဝီရသူနောက်လိုက်ရဲ.တိုင်တန်းစာမှာ ကျနော့် မှတ်ပုံတင်နဲ.လိပ်စာအပြည့်အစုံပါတာထောက်ရှုရင်တော့ ဒီအချက်အလက်တွေကို အာဏာပိုင်ကလွဲပြီးတစ်ခြားသူတို့ကိုဘယ်သူ့မှပေးစရာမရှိပါ။)
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဓမ္မ၀ါဒီတွေကို ဓမ္မခွန်အားများနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့၊ အဓမ္မ၀ါဒီတွေကို သစ္စာတရားနဲ့ အချိန်မရွေးတိုက်ဖျက်ဖို့ အသင့်ဖြစ်ကြောင်းအခိုင်ပြောဆိုလိုပါတယ်။ အင်မတန်ကြီးလေးတဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေကို တရားဝင်လူသိရှင်ကြားထောက်ခံပြောဆိုနေတဲ့ ဒုစရိုက်သမားများကို အာဏာပိုင်များက အရေးမယူပေမယ့် သတင်းစာသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အဓမ္မကိုအဓမ္မအဖြစ်ထောက်ပြခဲ့တာနဲ.ပတ်သက်ပြီး မည်သည့်နည်းနှင့်မျှတောင်းပန်စရာ၊ ညှိနှိုင်းစရာမရှိကြောင်း လည်း ပြောဆိုလိုပါတယ်။
ဦးကိုနီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ လင်းဇော်ထွန်း၊ ဇေယျာဖြိုးတို့ဟာ မဘသထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေကို သီးသန့်တွေ.ဆုံခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေတွေ.ရတယ်၊ ဆိုတော့ ဆရာ၊ ဒကာအနေအထားနဲ့ သူတို့က ဒီကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ မဘသအဖွဲ.ရဲ. သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိမရှိကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါကိုမဘသတွေကမကျေမနပ်စတင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကျနော့်ကိုတရားစွဲဖို့အခြေအနေစိုက်လာတာပဲလို့ကျနော်ယူဆပါတယ်။
ဒုတိယဓာတ်ပုံမှာ လင်းဇော်ထွန်းနဲ. ဇေယျာဖြိုးမဘသဥက္ကဌ ဦးတိလောကနဲ. ၀ီရသူကို ၂၀၁၅ မှာတွေ.ဆုံခဲ့တဲ့ပုံပါ။ ဒီလိုပုံတွေကို ထောက်ရှုပြီး အကြောင်းရှိလို့မေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယိမ်းယိုင်နေတဲ့ တရားရေးစနစ်ကြီးထဲမှာနေရပေမယ့် လောကလူ့ဘောင်အတွက်မရှိမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ တရားဥပဒေကိုရှောင်ဖယ်ပြီး ကျနော်တို့ ဘယ်တော့မှထွက်မပြေးပါဘူး။
ကိုဆွေဝင်းကို နိုင်ငံတော်ကိုယ်တိုင်က ဂုဏ်ယူဖွယ်နိုင်ငံသားကောင်းအဖြစ် ချီးကျုးဂုဏ်ပြုကြောင်း စာထုတ်ပြန် အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံရသူဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း အင်းဝအပ်ချုပ်ဆိုင်မိသားစုက အိမ်အကူ ကလေးငယ်များကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သည့်အမှုကို ဖော်ထုတ်ပြီး တရားသဖြင့် အရေးယူနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ကိုဆွေဝင်းက အကယ်၍များ သူ့ကို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုများ ပြုခဲ့သည်ရှိသော် ၎င်းသဘောထားများကို မှတ်တမ်းအဖြစ် ကျန်ရှိစေရန် မေးခွန်းနှင့် အဖြေများကိုလည်း ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
← ပန်းချီ သန်းဌေးမောင် – တောင်များ၏ အရှင်သခင်
တူမောင်ညို – သောနုတ္တိုရ်လက်သစ်တွေ သင်္ကန်းခြုံပြီး “၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေနဲ့ စစ်အုပ်စု” ကို ဗြောင်ကာကွယ်တဲ့ ခေတ် →
ချမ်းမြ (မုိုးမခအထောက်တော်) – ပြည်မြို့က မှတ်ပုံတင်မထားတဲ့ ဂျပန်ပုိုင်စက်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ပဋိပက္ခ အချက် ၆ ချက် သဘောတူ
March 21, 2014 Aung Htet
One thought on “မဘသနဲ့ ၀ီရသူတို့က မြန်မာနောင်းသတင်းထောက် ကိုဆွေဝင်းကို တရားစွဲဟု ဆို”
we are “ko swe win”